Shacabka Jowhar oo debadbax uga horjeestay dhac loo geystay nin ganacsade ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jowhar – Mareeg.com: Dadka ku dhaqan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta dhigay debadbax ay uga soo horjeedaan dhac shalay askarta dowladdu u geysteen mid ah sarriflayaasha degmadaas.
Xasan Daa’uud Sheekh Siidoow oo ah sariflaha shalay dhaca loo geystay ayaa u sheegay BBC-da in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ugu yimaadeen suuqa ayna amar ku siiyeen inuu furo sanduuqiisa ay lacagaha ugu jireen, si ay uga baaritaan ugu sameeyaan, iyagoo ku andacooday iney ka shakiyeen.
“Ciidamadu waxay i yiraahdeen fur sanduuqa, aniguna waan diiday, balse suuqleydii ayaa igu yiri u fur haka baaraan waxay ka shakiyeenne, markaan furay ayay kala baxeen lacag dhowr milyan ah oo Shillinka Soomaaliga ah, waxeyna ku cacareen gaari tikniko ah oo goobta u yaallay” ayuu yiri ganacsade Xasan Daa’uud.
Markii falkaasi dhacay kadib ayaa dadweyne farabadan caroodeen, taasoo keentay in maanta uu dhaco debadbax looga horjeeday falkaas dhaca ah.
Dadkan banaanbaxayay ayaa waxaa ay gaareen xarunta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo ku qeylinayay ereyo loogaga soo horjeedo maamulka degmada Jowhar.
Maamulka degmada Jowhar ayaa ugu baaqay shacabka degmada in ay is dejiyaan waxana uu guddoomiyaha degmada Jowhar Maxamedamiin Cismaan Xaaji Cabdulle uu sheegay in maamulka degmada Jowhar uusan raalli ka ahayn falkan dhaca isla markaana lala xisaabtamayo ciidamadii falka ka geystay degmada Jowhar.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Cabdi Jiinow Calasow oo ka hadlay falka dhaca ah iyo debadbaxa ku xigay ayaa sheegay iney ku raad joogaan kooxdii dhaca u geystay ganacsadahaas.
Wuxuu sheegay Cabdi Jiinow in debadbaxu muujinayo in Jowhar ay ku yaryihiin falalka dhaca ah, wuxuuna adkeeyey iney ka hortegayaan falalka nuucaas ah.
Degmada Jowhar ayaa ka mid ah degmooyinkii horay looga saaray Alshabaab, islamarkaan degan oo ay ku yaryihiin falalka amni darrada ah.